खरीद दिशानिर्देश - Jiangyin Brenu उद्योग टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड।
आजको अनौठो प्याकेजहरूको संसारमा ग्राहकहरू उपकरणको अनुसन्धान गर्न समय लिन महत्त्वपूर्ण छ, इन्टरनेटको विकास, गुणस्तरको मेशिन र सेवाले तपाईंलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बनाउँछ, BRENU फ्याक्ट्री मध्ये एक हो जुन सँधैका लागि प्राविधिक सहयोग दिन्छ।
अर्डर गर्नुभन्दा पहिले तपाईले चिन्नुहुने मेशीन
के मेशिनहरू अपग्रेड गर्न योग्य र समायोज्य छन्?
के तिनीहरू तपाईंको कम्पनीको साथ बढ्छन्?
कुन सुविधाहरू मानक छन् र विकल्पहरूको रूपमा के आउँछ?
के मेशिनहरू मर्मत गर्न र सफा गर्न सजिलो छ?
के तिनीहरू ऊर्जा कुशल छन्?
के मेशिनहरू उचित कागजात र म्यानुअलको साथ आउँछन्?
के मानक, अनुकूलन र कपडा सजिलै मेसिनको लागि उपलब्ध छन्?
अनलाइन सेवा र सबै भिडियोको साथ?
किन Brenu छनौट?
प्रदर्शनमा द्रुत नेतृत्व समय र हातहरू।
BRENU को अभ्यास गरिएको निर्माण प्रक्रियाहरू, पूर्ण स्वचालित र रोटरी प्रणालीहरूमा समेत उद्योगमा केहि द्रुत नेतृत्वको समयको लागि अनुमति दिनुहोस्।
उत्तर: विशेषज्ञ सेवा, सेटअप, र लाइन वा भिडियो मा प्रशिक्षण
मर्मत, प्रशिक्षण र स्थापना सबै सेवाहरू हुन् जुन BRENU ले ग्राहकहरूलाई प्रस्ताव गर्दछ। उचित स्थापना र सेटअप नयाँ उपकरणहरू सकेसम्म चाँडो र प्रभावकारी रूपमा काम गर्नको लागि महत्वपूर्ण छन्। BRENU यो बुझ्दछ, र किन सबै BRENU मेशिनहरूले प्रत्येक ग्राहकको व्यक्तिगत आवश्यकताको लागि क्यालिब्रेट कारखाना छोड्दछ। BRENU का प्राविधिकहरूले पनि हाम्रा ग्राहकहरुलाई कसरी अधिकतम प्रदर्शन गर्ने र मेशीन डाउनटाइम कम गर्ने बारे तालिम दिन्छन्। त्यहि समयमा हामी कुन लाईन अनुप्रयोगबाट हामी अनलाइन सेवा प्रदान गर्दछौं, हामी च्याट वा अन्य तरिकामा।
बी। डिजाइनिंग मेशिन जुन ग्राहकको साथ विकसित हुन्छ।
BRENU प्याकेजि lines लाइनहरु को एक प्रमुख विशेषताहरु हो कि तिनीहरू विभिन्न परियोजनाहरु को दायरा समायोजन गर्न को लागी डिजाइन गरीएको छ। BRENU लाई थाँहा छ कि समय बढ्दै जाँदा उत्पादनहरू परिवर्तन गर्न आवश्यक छ र हाम्रो लाइनहरू ती आवश्यकताहरूसँग बढ्नको लागि डिजाइन गरिएको छ। प्रत्येक मेशीन ईन्जिनियर गरिएको छ धेरै कामहरू ह्यान्डल गर्न र ती बिभिन्न रोजगार बिच स्विच गर्न को लागी कम डाउनटाइमको साथ। यसले हाम्रो प्रतिस्पर्धी मोडेलहरूको सीमित क्षमताहरूको तुलनामा BRENU मेशिनहरूलाई अझ राम्रो लगानी बनाउँछ।
सी। स्टकमा र भागहरूको द्रुत डेलिभरी।
BRENU १०,००० वर्ग फुट फुट गोदाममा २ 27,००० विभिन्न भागहरू छन्। सबै मुख्य कम्पोनेन्टहरू दुबै ग्राहक र पार्ट्स टेक्नीशियनको लागि छिटो पहिचान र वितरण प्रदान गर्न सजिलो पहिचानको लागि चिह्नित छन्।
D. हामीलाई थाहा छ र हाम्रा ग्राहकहरु लाई याद गर्दै।
रेकर्ड राख्ने: BRENU तस्विरहरु, उत्पादन लग, बोतल, टोपी, लेबल, नमूनाहरु सहित सबै चीजको विस्तृत खाता राख्नको लागि आधुनिक सीआरएम सफ्टवेयरको प्रयोग गर्दछ, मेशीन जन्म दिनको तल। हामीले रोलिंग लाइब्रेरी र्याकिंग पनि स्थापित गर्‍यौं हजारौं मेशिनहरूको रेखाचित्र, र ग्राहकहरूको ट्रयाक राख्न